Mayelana NATHI | Zhejiang Gogogo Mechanical & Electrical Co, Ltd.
Isigaba Esisodwa Sezimoto Zikagesi
Isigaba Esithathu Sezimoto Zikagesi
I-GOST ANP Motor
IE2 / YE2 Imoto
IE3 / YE3 Isithuthi
I-Yb3 Explosion Proof Motor
I-DZS / DZR
Ipompo Elicwilisiwe Lokujula Kahle
End ukuncela ovundlile Fire Pump
I-Xbd Fire Pump
Ukuzimela kweJet Pump
Iphampu yePheripheral yokuzimela
Ibhulashi Solar Pump
Iphampu ye-Dc Brushless Deep Well Solar Pump
Ipompo Solar Solar Pump
Pst ovundlile Centrifugal Pump
Insimbi Engagqwali Mpo Inline Centrifugal Pump
Inkambo yemishini neye-elekthronikhi
Imoto yokuqala kagesi yasungulwa ngo-1822 nguMichael Faraday. Imoto yathuthukiswa emva konyaka uHans Christian Ørsted etholile ukuthi ukuhamba kwamandla kagesi kudala amandla kazibuthe alinganayo. Le moto yakudala ibivele iyicingo elicwiliswe kancane engilazini ye-mercury enozibuthe ezansi. Lapho ucingo luxhunywe kubhethri kwakhiwa amandla kazibuthe futhi lokhu kuhlangana nensimu kazibuthe enikezwe umazibuthe kwabangela ukuthi ucingo lujikeleze.
Eminyakeni eyishumi kamuva kwasungulwa i-generator yokuqala kagesi, yaphinde yasungulwa nguMichael Faraday. Le jeneretha yayiqukethe uzibuthe odlula ngekhoyili yocingo kanye nomsinga wokuheha owawulinganiswa yi-galvanometer. Ucwaningo nokuhlolwa kukaFaraday ngogesi kuyisisekelo semithetho eminingi yesimanje ye-electromechanical eyaziwa namuhla.
Intshisekelo kuma-electromechanics ikhuphuke ngocwaningo ekuxhumaneni okude. Ukwanda okusheshayo kwe-Industrial Revolution kukhiqize isidingo sokuxhumana kwe-intracontinental, okuvumela i-electromechanics ukuthi ingene emsebenzini womphakathi. Ukudluliswa kudalwe nge-telegraphy njengoba kusetshenziswa amadivayisi we-electromechanical ukuvuselela amasiginali we-telegraph. Iswishi yeStrowger, eyePhaneli, namadivayisi afanayo asetshenziswa kakhulu ekushintshaneni ngocingo okuzenzakalelayo kwasekuqaleni. Ukushintshwa kwe-crossbar kwaqala ukufakwa kabanzi phakathi nekhulu lama-20 eSweden, e-United States, eCanada naseGreat Britain, futhi lokhu kwasakazeka ngokushesha kuwo wonke umhlaba.
（I-ZHEJIANG GOGOGO MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD, njengomkhiqizi onolwazi nomhlinzeki wama-motors, amaphampu wamanzi neminye imikhiqizo ethathwe kokunye.
UMnu Weed Zeng ungumsunguli, Usebenze ku izigaba ezintathu zemoto kagesi,isigaba esisodwa se-capacitor isiqalo semoto,Iphampu yamanzi yamapayipi weCentrigugal, futhi Impompo Yendle Engaphansi umkhakha iminyaka engaphezu kwengu-20, ukhonza amakhulukhulu wamakhasimende futhi uqonda izidingo zamakhasimende ahlukile.Qonda izici ezahlukahlukene zemikhiqizo.Ngesikhathi somsebenzi, uhlangane namakhasimende ahlukahlukene, amanye amakhasimende adinga umkhiqizo owodwa kuphela. Amakhasimende adinga izinhlobo ezahlukahlukene zemikhiqizo.Ukuze sihlangabezane nezidingo ezikhethekile ezahlukahlukene, sesiqale ukunikela ngemikhiqizo eyahlukahlukene.Lokhu kungasiza amakhasimende ukuthi agcine isikhathi esiningi, athenge izindleko nomzamo.Konke esikwenzile kuthuthukise kakhulu ukwaneliseka kwamakhasimende Futhi ngasikhathi sinye, amakhasimende angenise amakhasimende amaningi ngokwengeziwe kithi ngoba anelisekile ngemikhiqizo nezinsizakalo zethu.
Umkhiqizo wethu "IZIMOTO ZEGOGOGO", "i-EASTOP MOTOR" idume kakhulu ezimakethe eziningi ezisathuthuka, njengeGibhithe, iSudan, i-Iraq, iMorocco, iBangladesh, iPhilippines, iViatnam, iThailand, iGhana, iTopiya, iSrilanka, iPoland, iSpain, iTurkey, EMexico, e-USA, eCosta Rica, eColombia,
ENigeria, Kenya, njll ngaphezu kwamazwe angama-30.
Sitholakala kuZeguo ezimbili, iWenling okuyi-3hours'way kuphela ukusuka echwebeni lesi-2 ngobukhulu base-China-portbo.Sinezinhlangano zethu ezisizayo ezisebenza ngogesi, ifektri yepompo lamanzi, nomshini wokuhlanza ophakeme we-presurre factory.Nethimba lethu eliqinile le-R & D, ingahlinzeka nge-OEM / ODM / OTM service.we imikhiqizo yethu siyinikezela ku-ITT, ATLAS, CNP, WORDWIDE, njll ngqo noma nge-agents.we yethu ukuthekelisa imikhiqizo yethu ngaphezu kwama-200, 000pcs njalo ngonyaka.
Ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi yemikhiqizo yethu, sinohlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi lwayo yonke inqubo kusuka ekukhethweni kwempahla eluhlaza, izingxenye zokulungiswa, izingxenye ziyahlangana, konke ukuhlolwa kwe-packagings.ifinyelela isilinganiso esifanelekile esingu-100%, isilinganiso sokwaneliseka kwamakhasimende esingu-98%.
Ukuze sisekele amakhasimende ethu futhi sandise imakethe yethu, singafaka izicelo zezitifiketi ezahlukahlukene njenge-CE, TUV, ETL, UL, COC, SONCAP, COCQ, SAS0, njll.
Sethemba ngobuqotho ukusebenzisana nawo wonke amakhasimende ethu ukudala impumelelo futhi sabelane ngezimfihlo zethu zokuphumelela.
Imikhiqizo esezingeni eliphakeme, Insizakalo enhle kakhulu, Intengo enengqondo, ukulethwa okufika ngesikhathi
Lesi yisikhali somlingo kuwo wonke amakhasimende ethu amasha ukuba abe amakhasimende ethu amadala, kanye nokuphishekela kwethu okuphikelelayo.
Sicela uxhumane nathi ukuthola eminye imininingwane uma udinga.
THOLA ISIPHAKAMISI SAMUVA KUSUKELA KITHI
I-ZHEJIANG GOGOGO MECHANICAL & ELECTRICAL CO., LTD, njengomkhiqizi onolwazi nomhlinzeki wama-motors, amaphampu wamanzi neminye imikhiqizo evela ...
NO.411-412, 1ST BUILDING, JIAKAICHENG, ZEGUO AVENUE, WENLING CITY, ZHEJIANG, ECHINA.